नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : देख्न यत्ति मात्र बाँकी थियो यो पनि देखियो !
देख्न यत्ति मात्र बाँकी थियो यो पनि देखियो !
देख्न यत्ति मात्र बाँकी थियो यो पनि देखियो ! अब मरियो भने पनि कुनै घिड्किसो बाँकी नरहने भयो । बरु अर्का कार्यकारी अध्यक्ष कता बसेर ढोल पिट्दै हुनुहुन्छ वा बाँसुरी बजाउँदै हुनुहुन्छ कुन्नी ? त्यो पनि देखाएका भए राम्रै हुन्थ्यो ! अरु मन्त्री र साँसदलाई छक्का नाच नचाएको भए अझ बेश हुन्थ्यो यहाँ ।
कोरोना भाईरसको आतंकले सयौं मानिस चाइनामा उध्दार नपाएर रुँदै बन्द कोठाभित्रबाट गुहार माग्दैछन तर सरकार त्यो रुवाई सुन्दैन ।
धुर्मुस र सुन्तली बिचरा हास्यब्यङ्ग छाडेर, खाई नखाई बिकास निर्माण, रङ्गशाला निर्माणमा अहोरात्र खट्ने त्यो पनि महायज्ञ गरेर र सहयोग उठाएर तर प्रधानमन्त्री र नेताहरु बाँसुरी र सारङ्गी बजाएर हाँस्दै मजाक गर्दै .... ।
अब हामी गायक गायिका, बाद्यबादकहरुको पनि औचित्य सकिए जस्तै छ ।
यसै सन्दर्भमा लोकप्रिय गायक राज सिग्देल भाईले मेरो एउटा स्टाटसमा कम्मेन्ट गर्दै भन्नुभएको एउटा कुरा याद आयो - "दाई यो देश, देश होइन, बजार हो !"
तपाईंलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी !